Isinqumo sebheyili ecaleni losolwa ngokusoconga abe-ANC | News24
Isinqumo sebheyili ecaleni losolwa ngokusoconga abe-ANC
PHOTO:nokuthula khanyile Amalunga e-ANC abebhikisha ngaphandle kwenkantolo ngesikhathi kuqhubeka ukulalelwa kwesicelo sebheyili.
KULINDELWE ukuba namhlanje inkantolo kamantshi eMgungundlovu ikhiphe isinqumo ngebheyili ecaleni lokubulala eselidonse amehlo abantu abaningi elibhekene noMbuyiseni Shabalala (40).
Ngesikhathi evela enkantolo ngoLwesihlanu olwedlule, kufundwe incwadi efungelwe ka Jabulani Nene onguNobhala wegatsha ku ward 15. Lencwadi efungelwe ibiqinisekisa ukuthi uShabalala kwenzeka lesigameko sokubulala nje ubengeselona ilungu le-ANC kodwa ubeseyilungu le-EFF.
UNene kulencwadi uveze ukuthi uShabalala wabe engumgcinimafa kuleligatsha kusukela ngonyaka ka 2011 kanti isikhundla sakhe siphele ngo- Okthoba wonyaka ka 2015.
“Emuva kwalokho ubesefaka umoya kwamanye amalunga ukuthi angabe esayihambela imihlangano yenhlangano. Yena ugcine ukuhambela imihlangano ngo Febhruwari nonyaka sabe sesithola ulwazi lokuthi akaselona ilunga lenhlangano ngoba futhi ubengafaki izixoliso uma engazanga emihlanganweni njengoba kwenziwa ngokomgomo,” kusho uNene kulencwadi efungelwe.
UNene uphinde waveza ukuthi uShabalala mhlaka 5 no 6 kuMashi nonyaka wazama ukuvimba amalungu enhlangano ka ANC ayenxenxa abantu ukuba bayobhalisela ukuvota.
Ummeli kammangalelwa uPhumlani Fakude uziphikisile lezinsolo wathi umsolwa uyilungu le-ANC njengoba agcina ukuvuselela ubulunga bakhe ngonyaka ka 2014.
“Lesitatimende asisho lutho, asicacisi ukuthi umsolwa uyilunga le-EFF kanjani. Ingabe uvela ngaphansi kohlu lwamagama amalunga e-EFF? Akukho esikushoyo noma esikuqinisekisayo. Umsolwa uyilungu le-ANC futhi igama lakhe liyavela ngaphansi kohlu lwamagama amalunga esifundeni saseMoses Mabhida,” kusho uFakude.
UFakude uthe umbuso awunalo icala eliqinile ongashushisa ngalo ummangalelwa njengoba ekugcineni ushaye ingwijikhwebu wathi uyilungu le-EFF.
UFakude ephetha uthe umsolwa kufanele inkantolo imunike ibheyili njengoba bungekho ubufakazi bokuthi unenjwayezi yokwenza amacala .
“Umbuso awunalo icala eliqinile ongashushisa ngalo ummangalelwa njengoba ekugcineni ushaye ingwijikhwebu wathi uyilungu le-EFF. Lokhu kungubupolitiki futhi kuveza ukuthi uhlangothi lombuso lugcwele ngezinto ezingelona iqiniso.”
Umshushisi uThandeka Mkhize uthe umsolwa kufanele anganikwa ibheyili ngoba angabaleka angabuyi ukuzobhekana necala lakhe.
“Uyazi uma icala limlahla angadonsa isikhathi eside, ukuthi akanazo izincwadi zokuvakasha ngaphandle ngeke kumvimbe ukuthi abaleke.”
UMkhize uphinde wakhalela ukuphepha kofakazi uma umsolwa kwenzeka enikwa ibheyili.
“Uma ummangalelwa ededelwa kuyobeka engcupheni ukuphepha kofakazi kanye nemindeni yabashonelwa njengoba behlala endaweni eyodwa. Uma enganikwa ibheyili ubani owaziyo ukuthi kungenzekani kofakazi,” kusho yena.
Ephetha uthe ukudedelwa kukaShabalala kungaphazamisa ukuvikeleka kwabesifazane emphakathini.
UShabalala ubheke necala lokubulala uBadedile Ntshapa (54) noPhetheni Ngubane (60) abadutshulwa bevela emhlanganweni wegatsha le-ANC kuward 15 ngenyanga ka Juni.